फरक किसिमको ‘दशैं’ यो बर्ष - Enepalese.com
शशी के.सी २०७७ कार्तिक ४ गते ०:०५ मा प्रकाशित
सदा झैं यो बर्षको ‘दशैं’ पनि आयो। तर यो बर्ष कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा धेरै कुरा परिमार्जित गर्नु परे जस्तै‘दशैं’ पनि अलिक फरक प्रकारले मनाउनु पर्ने भएको छ। हुनत हामी विदेशमा बस्नेहरूको दशैं त्यसैपनि नेपालमा मनाउनेभन्दा फरक नै हुन्छ। नेपालमा जस्तो दशैंमा बिदा त हुॅंदैन। तर दशैंको टिकाको दिन प्राय: सबै नेपालीले कामबाट बिदालिन्छन्। जति सक्दो घरको परिवारहरू सॅंगै भएर टिकाको साइतमा नै टिका लगाउॅंछन्। परिवार साथमा नहुनेले साथीभाई, इष्टमित्रकोमा गएर मनाउॅंछन्।
भन्छन् नी जहाॅं बस्यो त्यहीॅं घर र जो वरीपरी छन् तिनै इष्टमित्र ! अमेरिकामा आएको शुरूको केही बर्षहरूमा आफ्नो नातागोताहरू नजिकै नहुॅंदा घरमा दशैंको दिन टिका लगायो। नेपालमा रहेका मान्यजनहरूबाट फोनमा टिका,आशिर्वाद थाप्यो। अनि साथीहरू एकैठाउॅंमा भेला भएर दशैंमा खाईने परिकार खाएर मनाउॅंथ्यौं। अहिले त एक- दुई घण्टाको दुरीमा एउटै हजुरबुबाका छोरा र छोरी पट्टीका हामी एघार घर संतान बस्छौं। सबै एकैठाउॅंमा भेला हुॅंदा केटाकेटी सहित ४० जना भन्दाबेसी हुन्छौं। अझ कुनै बर्ष त अरू राज्यमा रहेका संतान र नेपालबाट कसैको बुबाआमाहरू आएकोबेला त झन् धेरै हुन्छौं।हो न हो पुरै परिवार अमेरिकामा पो रहेछन् जस्तो भान हुन्छ।
हामी प्रत्येक बर्ष पालैपालो एकजनाको घरमा, सबैको अनुकुल समय मिलाएर, बेलुका एकैपटक भेला भएर दशैं मनाउॅंनेगर्थ्यौं। यस बर्ष त भेला हुन असम्भव छ।अहिले पनि अमेरिकामा कोरोनाको कहर उस्तै छ। पब्लिकमा मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने र ६ फिटको सामाजिक/ भौतिक दुरी कायम गर्नै पर्छ। त्यस्तै राज्य अनुसार आ-आफ्नो नियम छ। ५० जना भन्दा धेरै जमघट गर्न नपाईने, रेष्टुरेन्टमा पनि टाढा बसेर खानु पर्ने, अफिसमा दुरी कायम गरेर काम गर्नु पर्ने र मास्कलगाउनु पर्ने आदी। त्यसैले सबैको सुरक्षाको ख्याल गर्दै अमेरिकाको सोमबार बिहान टिकाको दिन घरघरबाट जुमप्रबिधिको माध्यमले एकैठाॅंउमा भेला भएर ‘दशैं’ मनाउने भएका छौं।
ओहो, अहिले प्रविधिको बिकासलाई पनि मान्नै पर्छ। आज भन्दा १५-२० बर्ष अगाडी नेपालमा कुरा गर्न निक्कै गार्र्होहुन्थ्यो।फोनबाट कुरा गर्न मिल्ने पाॅंच डलरको १५ मिनेट पुग्ने कार्ड किन्यो। कार्ड त बोल्दाबोल्दै छिट्टै सक्किने रकहिलेकाहीॅं त हेलो हेलो , केही सुनिएन/ बुझिएन भन्दाभन्दै सकिन्थ्यो। अहिले त नेपालमा पनि इन्टरनेटको राम्रो सुविधा छ। विदेशमा रहेका संतानसॅंग सम्पर्क गर्न भनेर सबैले बुबा वा आमाको फेसबुक, भाईबर, मेसेन्जर, स्काईप जस्ता सोसल मिडिया एकाउन्टहरू खोलिदिएका छन्। उहाॅंहरूसॅंग दिनमा एकपटक अनुहार नै देखादेख हुने गरेर कुरा हुन्छ। भौतिक दुरी त कहाॅं हो कहाॅं टाढा छ । तर धन्न अनुहार नै देख्न पाउॅंदा नजिकै नै छौं जस्तो लाग्छ।
अझ रमाइलो त यस बर्षको दशैंमा जुममा नेपालमा रहेका हामीहरू सबैका बुबाआमाहरू पनि जोडिनु हुनेछ। त्यस्तैअमेरिकाको बिभिन्न राज्य, क्यानडा र नेपाल आदी सबैतिरबाट अरू आफन्त पनि जोडिने भएका छन्।
अन्त्यमा, सबैको सुरक्षाको ख्याल राखेर, सुरक्षित तवरले ‘दशैं’ मनाऔं ! शुभकामना सबैलाई!